AHV Video Editor for Mac: Video ayeey Tool u Mac
> Resource > Mac > AHV Video Editor for Mac: Video ayeey Tool u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
AHV Video Editor waa-waqtiga dhabta ah, codsiga software video tafatirka waqtiga ku salaysan for Windows ka sokow Windows Movie abuuray oo lacag la'aan ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaa laga yaabaa inaad wax yar ka niyad jabtay AHV Video Editor oo keliya ka shaqeeya Windows. Tan iyo markii aad halkan u joognaa, waxaad u baahan tahay barnaamijka la mid ah AHV Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) (Mountain Libaaxa, Libaaxa, Snow Leopard) ama AHV video dhiganta kale editor kala duwan ee Mac. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
Fursad weyn waa Wondershare Filmroa for Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) , taas oo software ah video dareen tafatir sida AHV Video Editor laakiin loogu talagalay Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6. Sidaa daraadeed, aad edit karaa oo dhan qaabab video caan ah oo leh hawlaha tafatirka anfacaya, sida ku daatay, ku biiro, isku shaandheyn, guurka, horyaal, Intro / credits. iwm si ay u noqon photos & videos in videos guriga qurux badan leh music asalka ah ee wadaagga ah ee kiniiniyada YouTube,, DVD, ama daawashada TV-ga. Sii isku day ah.
Interface iminka la Support Qaabka Broad
AHV Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) loogu interface horyalka Talyaaniga in si fudud Waayo, mid kasta si ay u isticmaalaan. Waxa ay ku siinaysaa taageero dhamaystiran oo dhan qaabab warbaahinta caanka ah, taas oo macnaheedu yahay diinta ka hor inta looga baahan yahay in ay sii tayada ugu wanaagsan iyo wakhti badbaadin iyo aad bay u energe marka iyaga loo dhoofiyo ma. Qaababkan soo socda si buuxda u la jaan qaada Mac AHV Editor (Mountain Libaaxa ka mid ah):
Video qaabab : MP4, FLV, AVI, wmv, MKV, VOB, MOV, F4V, M4V, Mpg, M2TS, MTS, 3GP, ASF, DV, mod, TOD, TS, TRP iwm
Qaabab Audio : MP3, AAC, AC3, FLAC, M4A, AIF, AIFF, daanyeer, AU, MKA, MP2, OGG, regelingen, WMA, iwm.
Qaabab Image : PG, PNG, GIF, BMP ,, TIF, ICO
Edit Si fudud & Gaw
AHV Editor Mac bixisaa xal aad ugu wayn dhamaan sifooyinka video tafatirka sare oo caan ah, oo ay ku jiraan goo, Dalag, isku beddesha, Fast / mooshin gaabis ah, isbedel cod, fursadaha ganaax-habayn, waqtiga ku salaysan tafatirka, iwm Just muujiyo video oo guji tafatir ah icon image baar qalabka si ay u doortaan shaqada aad rabto.
Oo weliba aad, edit karaa maqal ah si toos ah in aad videos. Tusaale ahaan, ku dar music soo jeeda, isu geeyo kuwan raadkaygay audio la video, record iyo codsan cod-badan ama music live, ama dhawaaqyo diiqayo rabin carrab la '.
In kor loo qaado Your Media Files Like Pro ah
Iyadoo AHV Video Editor Mac, waxaad badan sida diirada lacag la'aan ah iyo saamaynta qoraalka ku dari kartaa inaad keento videos heerka ku xiga isla. Muujinta video clip iyo weeraray " "ama guji marsho ku video ku hoos iyo dooran shaqada aad rabto. Ka dibna waxaad arki doono suuqa kala socda in uu leeyahay afar tabs: "Title", "Filter", "Video" iyo "Audio".
Dhoofinta Your abuuray Faylal ay meel
AHV video dhiganta editor u Mac kuu ogolaanayaa inaad dhoofin aad videos in gebi ahaanba meel kasta. Waxaad dooran kartaa in geliyaan cusub ka dhigay video files si YouTube si toos ah uga Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) 's interface, ama iyaga si toos ah u dhoofiyaan si presets qaybiyay qalabka aad, ama xataa iyaga gubi in DVD ilaalinta muddo dheer.
VideoPad Editor for Mac: Professinal Mac Video Editor bilowga ah
Sida loo sameeyo a collage Digital Photo ee Mac